» अन्तरिक्षबाटै पहिलोपटक गरियो अपराध !
अन्तरिक्षबाटै पहिलोपटक गरियो अपराध !
नासाले पहिलोपटक अन्तरिक्षबाटै गरिएको अपराध सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । एक अन्तरिक्षयात्रीले स्पेस स्टेसनमै बसेर आफ्नो ‘स्पाउस’, जीवनसाथीको बैंक अकाउन्ट ह्याक गरेको नासाले सार्वजनिक गरेको हो । यो यस किसिमको पहिलो घटना भएको बताइएको छ ।
न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्ट अनुसार अन्तरिक्षयात्री एन मेक्लेनले आफ्नी पूर्वपार्टनरको अकाउन्ट चलाएको स्वीकार गरेपनि कुनै गलत कार्य नगरेको दाबी गरेकी छन् । यस्तोमा विछोड भइसकेकी उनकी पार्टनर, समर वर्डनले संघीय आयोगमा उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी हुन् । अहिले भने मेक्लेन पृथ्वीमा फर्किसकेकी छन् । उनले आफ्ना वकिल मार्फत न्युयोर्क टाइम्ससँग भनेकी छन् कि, परिवारको आर्थिक स्थिति ठीक छ छैन भन्ने जाँच गर्ने प्रयास गर्न मात्र त्यसरी हेरेकी थिइन् , जसपछि आफूले छोराको ख्याल राख्न पर्याप्त पैसा रहेको थाहा पाएको उनको भनाइ छ ।
वास्तवमा सम्बन्ध विच्छेद गरेपनि दुवैले मिलेर छोरालाई सँगै हुर्काइरहेका छन् । उनका वकिल रस्की हार्डनले भन्छन् , “उनले स्पष्ट रुपमा आफूले कुनै अनुचित काम नगरेको बताउँदै आएकी छन् र सबै प्रक्रियामा पूर्ण सहकारिता जनाइरहेकी छन् ।” मेकक्लेन र समरले २०१४ मा विवाह गरेका थिए । समर पनि एयर फोर्स इन्टेलिजेन्स अफिसर हुन् । तर सन् २०१८ मा नै वुर्डनले डिभोर्स गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । यसरी अहिले नासा कार्यालयका अनुसन्धानकर्ताहरुले दुवैको आरोप सम्बन्धी छानबीन भइरहेको बताएका छन् । मेक्कलेनले भने ६ महिना अन्तरिक्षमा बिताएकी हुन् र अब ‘स्पेस वाक’ गर्ने पहिलो महिला बन्ने तयारी गरिरहेकी थिइन् । तर अन्तिम समयमा अन्तरिक्ष सुटको साइज सम्बन्धी समस्याका कारण सो कार्यक्रम रद्द गराउनु परेको थियो ।
अन्तरिक्षमा कानुनले कसरी काम गर्छ त ?
इन्टरनेस्नल स्पेस स्टेसन, आइएसएसमा पाँचवटा देश आबद्ध छन् : अमेरिका, क्यानडा, जापान, रुस र युरोप । जसमा अन्तरिक्षमै भएपनि जुनसुकै व्यक्तिमा राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ । अर्थात् यदि कोही क्यानडेली नागरिकले अन्तरिक्षमा अपराध गर्यो भने सो यात्री क्यानडाकै कानुन अन्र्तगत कारबाहीमा पर्नेछ । सबै देशलाई यही लागू हुन्छ । त्यस्तै अन्तरिक्ष कानुन अन्र्तगत अपराध गरि पृथ्वीमा फर्किसकेपछि अर्को देशका नागरिकमाथि कारबाही अघि बढाउने प्रबन्ध पनि रहेको छ । यसरी अन्तरिक्ष पर्यटन वास्तविकतामा परिणत हुने क्रममा रहँदा यस किसिमका घटना धेरै सुन्न पाइने अनुमान गरिएको छ । तरपनि नासाका अधिकारीले न्युयोर्क टाइम्ससँग बताए अनुसार हालसम्म भने अन्तरिक्षमा कुनैपनि अपराधिक गतिविधि भएकाबारे कुनै रेकर्ड छैन ।